Shiinaha Isboorti Isboorti Jacquard Fabric Iyo Scrimch Butt Leggings Dumarka Dumarka Sexy Yoga Leggings Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Wenchang
Dharka dharka jumlada Jacquard Fabric Iyo Scrimch Butt Leggings
Midab sare oo midab leh
Si dhakhso ah u qalalan
SOO SAARKA SOO SAARKA Yoga Xidho FABRIC
Shayga MAYA KWC21-4079
Waxyaabaha 88% Polyester 12% Spandex
Muuqaalka Neefsasho / Dabacsanaan Sare / Tayo Sare
Midab Sare Sare
Isticmaal Dharka Dabaasha / Dharka / Dharka Isboortiga
Shahaadada RSG / SGS
Maydhashada: Dharka waxaa laga sameeyaa fiber-ka daryeelka caafimaad ee jilicsan ee ku saleysan borotiinka. Kuma haboona in lagu xoqdo walxaha qallalan oo lagu dhaqo mashiinka dharka lagu dhaqdo. Dharka waa in lagu shubaa biyo qabow 5-10 daqiiqo. Isticmaal saabuun xariir khaas ah si aad u soosaartid budada dhaqeysid xumbo yar ama dhexdhexaad ah. Si fudud ugu xoq saabuunta, (haddii aad dhaqaysid dhar yaryar sida garbasaarrada xariirta, shaambo sidoo kale si ka wanaagsan ayaa loo isticmaali karaa), dharka xarka midab lehna si joogto ah ayaa loogu mayrin karaa biyo nadiif ah. cadceedda, mana aha in lagu kululeeyo qalajiyaha. Guud ahaan, waa in lagu qalajiyaa meel qabow oo hawo leh. Sababtoo ah falaadhaha ultraviolet-ka ee qorraxda si fudud uga sameeya dharka xarkaha jaallaha ah, libdha iyo da'da. Sidaa darteed, ka dib marka aad maydho dharka xariirta ah, laguma talinayo inaad u weeciso si aad biyaha uga saarto. Waa in si tartiib ah loo gariiriyaa, dhinaca gadaalna loo faafiyaa hawo. U oggolow inay qalajiso illaa ay 70% qalalan tahay ka hor inta aan la xoqin ama la gariirin.
Ironing: Waxqabadka lidka-duudduubnaanta dharka ayaa waxoogaa ka liita tan feybalka kiimikada, sidaa darteed waxaa jirta maahmaah ah "duuduubku ma ahan xariir dhab ah". Ka dib marka la maydho, dharka waa duuduubmay oo waxay u baahan yihiin in bir laga dhigto si ay u noqdaan kuwo adag, qurux badan oo qurux badan. Markaad feydinaysid, dharka ha qalalo illaa 70% qalalan, ka dibna si siman u buufi biyaha, sug 3-5 daqiiqo ka hor inta aanad shaandhayn, heerkulka feeraha waa in la xakameeyaa wax ka hooseeya 150 ° C. Birta si toos ah looma taabto dusha xariirta si looga fogaado aurora.
Badbaadinta: Ilaali dharka. Dharka khafiifka ah, shaatiyada, surwaalka, goonnada, jiifka, iwm, waa in la dhaqo oo la feereeyo ka hor inta aan la keydin. Dharka dayrta iyo jiilaalka, jaakadaha, Hanfu, iyo cheongsam oo aan ku habboonayn kala-goynta iyo maydhashada, waa in lagu nadiifiyo nadiifin qallalan illaa laga suulinayo si looga hortago caariyaysi iyo aboor. Kaawaynta ka dib, waxay kaloo door ka ciyaari kartaa jeermiska iyo ka hortagga cayayaanka. Isla mar ahaantaana, sanduuqyada iyo armaajooyinka lagu keydiyo dharka waa in la nadiifiyaa oo la xiraa inta ugu macquulsan si looga hortago wasakhda wasakhda.
Marka lagu daro soo saarista yoga dharka, waxaan sidoo kale leenahay dharka dabbaasha, surwaalka xeebta, dharka isboortiga, xirashada dharka, xirmooyinka barafka, dharka buuraha dharka.
Bixinta: waxaan badanaa aqbalnaa T / T 30%
Xirxirida: Duubista xirmooyinka leh tuubooyin gudaha ah iyo bacaha balaastigga ah ee banaanka ama sida ku xusan codsiga macaamiisha.
DIPS LAB waxay qaadataa 2-4 maalmood; SHAQO GARASHADA waxay qaadataa 5-7 maalmood. 10-15 maalmood oo loogu talagalay horumarinta saamiga.
Midab dheeh caadi ah: 10-15 maalmood.
Naqshadeynta daabacaadda: 5-10 maalmood.
Amar degdeg ah, way ka dhakhso badan tahay, fadlan dir emayl si aad ula xaajoodo.
Maxaad noo dooranaysaa / FEIMEI?
Waxaan iibsannaa dunta, waxaan soo saarnaa dhar dufan leh oo aan u dhimanayno ama aan daabacno annaga lafteena, taas oo ka dhigaysa qiimo tartan badan iyo gaarsiin dhakhso leh.
Hore: Dharka dharka jumlada Jacquard Fabric Iyo Scrimch Butt Leggings
Xiga: Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Maqaarka Neefsashada ee Dharka Yoga
dharka dib loo warshadeeyo
Yoga Saraawiisha Dharka
Yoga Xidho Dharka